SpaceX waxay bilaabi doontaa gantaalaha Falcon Falasti weyn ee todobaadkan ... malaha - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA SpaceX waxay bilaabi doontaa gantaal weyn Falcon Cadaadis dhamaadka todobaadkan ... malaha - BGR
SpaceX waxay bilaabi doontaa gantaal weyn Falcon Cadaadis dhamaadka todobaadkan ... malaha - BGR
Iyada oo dhammaan dariiqyada ku hareereysan ee bilicda, ku soo celinta iyo soo noqoshada guulaysta kaabsii Crew Dragon, iyo sidoo kale imtixaanaadka soo socda ee Starhopper, waxaad illoobi lahayd inaad illowdo SpaceX sidoo kale mashaariic kale oo diyaarin ah. Falcadka Falcon, oo markii hore bilaabay wax yar ka hor sanad ka hor wuxuu ku saabsan yahay inuu diyaar u noqdo safarkiisii ​​labaad ee samada, laakiin SpaceX waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay mucjiso si uu u ilaaliyo daaqad hadda ah. Daah la moodayay in ay qaataan meel wax yar ka dib horyaalka ugu horeysay, laakiin lahaa in ay dib loo dhigo dhowr jeer si loo soo afjaro March 2018 2018, iyo ugu dambeyntii in 2019 hore. Shirkaddu waxay ku saabsan tahay inay diyaariso maalinta weyn, laakiin taariikhdeeda rasmiga ah ee loo qorsheeyey Abriil 7e iyo 8e sano wuxuu u muuqdaa mid aan macquul ahayn .
SpaceX hadda waxay fileysaa inay si rasmi ah u daboosho gantaalkeeda. Tani waxay ahayd inay dhacdo March 31, laakiin hadda dib u dhigista ayaa dib loo dhigay dhowr maalmood, waxay u badan tahay in bilowga dhabta ah uu sidoo kale la kulmo dib u dhac yar.
Dabayaaqadii bishii March, SpaceX dhagar dab imtixaanka ma guurto ah gantaalada ay 31 March iyo gudbay meel toddoba maalmood si ay u diyaariyaan gantaal ee duulimaadka, furitaanka ayaa la qorsheeyay April 7. Haddii loo maleeyo in SpaceX ayaa qorshaynaysa in ay bilowdo maanta gantaal ah, waa heer sare lagama yaabo in gantaal uu diyaar u yahay in aan bilowno in seddex maalmood, xitaa hadii wax walba si fiican u dhaco.
Si kastaba ha ahaatee, Xoogga Falta ayaa hubaal ah inuu diyaar u yahay safarkiisii ​​labaad. Si degdeg ah ka badan ka dib, inkastoo uu furmo suuqa la bilaabay of April 7 waxay ahaayeen in baaba'aan, markii ugu badan tahay in uu noqon doono dhawr maalmood oo kali.
Si ka duwan kii ugu horreeyay ee Falcon Heavy, taas oo ahayd inta badan muujinaysa in SpaceX ay toogasho karto. oo ka mid ah gaadiidka culus ee culus, furitaankaas waxaa ku jiri doona mushahar laga qaado macmiil. Carsat Sacuudi Carabiya waxay ubaahan tahay SpaceX inay galiso xawaaladaheeda Arabsat 6A ee xuduudda. Marka loo diro boos, waxay kordhin doontaa isgaadhsiinta qaybo ka mid ah Afrika iyo Bariga Dhexe.
Fiiri Boostada Caalamiga ahi waxay heleysaa sheyadeeda ballaaran ee sahayda cusub - BGR
Doonniyawadayaasha 737 Boeing ee MAX cambaareeyay diriray software diyaaradaha ee laga badiyay - BGR